Indlela yokuthatha isilwanyana esahlukileyo kunye nokuba luncedo kangakanani
Ubuhle bomfazi Ukunyamekela umzimba
Ngokuqinisekileyo, wonke umntu uyazi malunga nesitya esahlukileyo. Olu tshintsho lwamanzi abandayo kunye namanzi ashushu. Indlela yokuthabatha iswahlulo esahlukileyo, kwaye luncedo njani? Abantu abaninzi bacinga ukuba isisindo sokuhlukana sisisifo sokuhlaselwa kwezifo ezahlukileyo, kodwa akunjalo. Isitya sokuhlukisana siya kukunika uvuyo, uvuselele isikhumba, uhlambulule i-pores yesikhumba kwindawo yokungcola, uphuculise ukujikeleza kwegazi. Iimpawu eziwusizo zomphefumlo onjalo ziya kuqinisa inkqubo yokuzivikela emzimbeni, ukuqeqeshwa kakuhle kwemigudu kunye nemithambo yegazi, okuphucula umlinganiselo wesisombululo emzimbeni wakho, izokugcina iipounds ezimbalwa.
Isilwanyana esichaphazelekayo akufanele sithathwe ngexesha lokuya esikhathini, ezinezifo zengcinezelo, abantu abane-tumor ebulalayo, i-spasms system system and vessels.
Ungathabatha njani isilwanyana esahlukileyo?
Le ntlanzi kufuneka iqale ngamanzi ashushu. Kufuneka kube nobushushu obumnandi bomzimba. Emva koko emva kwemizuzwana engu-15-20 kufuneka uguqule kumanzi abandayo. Kwaye kufuneka uphinda phinda kathathu. Emva kokuba udinga ukuzisula kakuhle ngehayile.
Okokuqala, amanzi atshisayo, ngoko xa umzimba usetyenziselwa, kufuneka uguqule amanzi ashisayo emininzi emininzi, emva komzuzu wamanzi abandayo, uphinde amanzi amanzi ashushu, kunye nomzuzu omnye ngamanzi abandayo. Ngoko kuyimfuneko ukwenza imizuzu eyi-10. Kunokwenzeka kwaye ngaphezulu xa kukho ixesha.
Konke oku kuyenziwe ngokukhawuleza, kodwa ngenxa yokulula okunjalo, isenzo sempilo esihle kakhulu. Ukuba imihla ngemihla isebenzisa isitya esahlukileyo siqhelekileyo, ke:
1. Zonke iinkqubo zentsebenziswano zenziwa.
2. Ukuphucula umthambo emzimbeni.
3. Ukucoca ngokupheleleyo umzimba wonke.
4. Iinqwelo kunye nentliziyo ziyomelezwa.
Kwaye ngenxa yoko, ukuvuselelwa komzimba, ukuphucula ukusebenza kakuhle, ukuphucula impilo.
Konke kuchazwe ngokucacileyo, ulusu luyilungu elikhulu kumntu. Ngesitya esahlukileyo siyaqeqesha isikhumba, umzimba size sithokoze kuwo. Kodwa inkqubo enjalo elula kufuneka iphunyezwe ngokufanelekileyo, umgaqo-siseko "ungenzi nzakalo". Qinisekisa ukuba udibane nodokotela wakho ukuba unesifo segazi, imithwalo yegazi, intliziyo, iimpompo zengcinezelo, kukho i-oncology.
1. Ngenkqubo nganye, kufuneka ukwandise nokunciphisa izinga lokushisa kancane. Umzimba kufuneka usebenzise ukutshisa kweqondo lokushisa.
2. Yiba luvila ngamanzi afudumele, uze uvule amanzi ashushu. Umzimba kufuneka uphelelwe ixesha elide kunokupholisa. Kungcono ukuthulula amanzi abandayo kuwo. Thatha ibhakethi yamanzi abandayo uze uyithulule kuwe.
3. Ukuphala kufuneka kuhlale kuvela phezulu.
4. Ungazifaki ukufisa. Emva kwesitya esichaseneyo, kufuneka kube nomvakalelo wokonwaba nokuthokoza, oko kuthetha ukuba inkqubo yenziwa ngokuchanekileyo. Musa ukuchukumisa ukuthanda kwakho kwingozi yempilo yakho. Kufuneka ukhulule kwaye ujabule.
5. Emva kokusetyenziswa kwentsasa kukulungele ukuhlamba. Ngaloo xesha, umzimba ufudumala, igazi ligijima ngokukhawuleza, alikuthinteli ukujuluka kokuhlamba umzimba.
6. Emva kokumisa, gubungela ngehayile yerry. Ngexesha elifanayo, oku kukukhuthaza ukujikeleza kwe-capillary and massage.
Isiphumo sinokuqiniswa kwinkqubo enjengeendlela zengqondo. Ukuba uhlabelela ingoma, iimoya iya kuvuka, kwaye xa uphinda uphinda into efana nale: "Umzimba wam uthola impilo, umncinci kunye nococa", kuya kuba nefuthe elikhulu.
Kuphela kwexesha, impembelelo yokubuyisela kwisitya esahlukileyo iyafezwa. Kodwa uya kuphawula ngokukhawuleza. Kwaye ukuba ungena kumkhwa, umphumo onjalo uza kuhlala ixesha lokuphila.
Abaninzi baye bakuva ukuba isitya esihlukileyo sinefuthe elihle emzimbeni womntu, kungekhona wonke umntu owaziyo ukuba yiziphi iingqinisiso. Ngokuqinisekileyo, isitya sinefuthe elihle kwinkqubo yenzwa. Ngenxa yobume beqondo lokushisa, abantu bafumana isityholo se-vivacity, ithoni yesikhumba iya kwanda, ukuqeqeshwa kweenqanawa kwenzeka. Kodwa ekuqaleni kwesi senzo umntu ahlaselwa. Emva koko, kufuneka azijwayele ukuzonwabisa nokuxinezeleka, kwaye isenzo esinjalo sifanele senziwe kaninzi. Emva koko kuya kuba nesidingo ngesimo seshawa esahlukileyo, sinika isibindi kwaye ngamaxesha okusuleleka kwintsholongwane kwandisa ukwanda komzimba.
Ndimele ndisebenzise njani isitya sohluke?
Awunayo ukukhawuleza ukugqithisa. Qala ngokushisa okukhululekile. Qalisa ngokutshisa, ugqibe ngamanzi abandayo. Ngaphantsi kwesitya kufuneka kube ngumzimba kuphela. Ubungakanani benkqubo kufike kwi-15 imizuzwana. Okokuqala, yenza amanzi apholileyo kwaye athambileyo apholileyo ukuya kumasekhondi angama-10. Ngokukhawuleza kwenza utshintsho olushintsha ngakumbi.
Kunconywa ukusula nokufudumala kakuhle emva kwenkqubo. Musa ukuphuma kwangoko kwisitrato, wenze njalo ukuba umzimba unalo ixesha lokufunda. Ngokuhlwa, sebenzisa isitya esahlukileyo kwiiyure ezintathu ngaphambi kokulala, ungakulibali ukuba le ntluphelo iphakamisa.
Ngaba ndingakwazi ukulahlekelwa isisindo ngesitya esahlukileyo?
Isilwanyana esahlukileyo siya kuba luncedo kwi-cellulite. Iimfumba kunye nesisu kufuneka zidityaniswe kwisinyithi sisetyhula ekude ukusuka emzimbeni ukuya kwiisentimitha ezilishumi. Imisongo kufuneka ihlasekwe phambili ukusuka phezulu ukuya phezulu, kwaye emva kwakho kufuneka wenze okuchaseneyo. Ukudibanisa kunye nokuzivocavoca unokufumana umphumo omuhle ekulwa nokunciphisa ubunzima kunye ne-cellulite.
Ngoku siyazi indlela yokuthatha isilwanyana esahlukileyo, kwaye sinceda njani. Iwahlulo oluchanekileyo nolushushu luya kunceda ukufezekisa umphumo omhle. Umzimba kufuneka ulungelelanise neqondo lokushisa elitsha kumcimbi wemizuzu. Kuye kwenziwa umthwalo omkhulu wokusebenza, kwaye abantu abanezifo zentliziyo kunye neengxaki zentshukumo yokujikeleza kufuneka baxoxe nodokotela ngaphambi kokuba bathathe isilwanyana esahlukileyo. Kubantu abadala asebegqithiseleyo, iingxaki zengcinezelo kufuneka zibonisane kwangaphambili kunye nogqirha, kungcono ukuthatha oku ngokulumkisa. Kuba umzimba, isitya sokubanda kubanda. Kodwa, ukusebenzisa isitya ngokulandelelana kushushu, kubanda, kushushu, kulula ukuphucula isiphumo esihle soweswahlulo olwahlukileyo kwinkqubo yonke yokujikeleza.
Indlela yokuhlakulela intle enhle
Ikhofi ibukela ekhaya
Amabhafu amanqabileyo emzimbeni
Ukunyamekela isikhumba esichukumisayo
Izindlela ezilula zokuba nesisu esihle kunye nesicatyambo
Yiyiphi idayodorante eyona nto iphumelelayo?
Isondo emva kodonga: iingcebiso malunga noqhinga
Isaladi e-spicy nge-avocado kunye nekhukhamba
Iingoma ezi-9 malunga nabafazi kunye neemoto
Iipulo ziyabhaka ngesonka se-stale
Kutheni abafana behamba ngamantombazana abo?
Ukuqulunqwa kwendlela elula
Izigulane zezilwanyana ze-duodenitis
Ukudandatheka kwabasetyhini: impembelelo yobomi bentsapho
Uninzi kangakanani uthando - uvavanyo lwabesetyhini
Beauty Recipes ekhaya
Inyaniso kunye neengcamango malunga nobuhlobo bokuqala
Ukwenzelwa ngokugqibeleleyo kumtshakazi onobumba
Hlazeradish sauce nge apula
Iimvelaphi zokutsala uthando
U-Evelina Bledans uhleka u-Anastasia Volochkova, ifoto
Ukufa kukaMikhail Zadornov kwakungenakukhunjulwa - owathandekayo kunye nesigidi sama-humorist wayenalo ithuba